Madaxweyne Xasan Sheekh oo qiray inay dowladdiisa ku fashilantay hal arrin oo muhiim ah (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo qiray inay dowladdiisa ku fashilantay hal arrin oo muhiim ah (DHAGEYSO)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si toos ah u qiray inuu fashilmay qorshihii isku dhafka ahaa oo ciidamada qaranka Soomaaliya lagu sameeyn lahaa intii uu isaga xilka haayay.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay sababaha keenay dib u dhaca ku yimid qorshihii ahaa in ciidamo isku dhaf ah la sameeyo ayaa sheegay inay ugu wacneyd dagaalka lagula jiro Xarakada Al-shabaab iyo sidoo kale dhaqaale yari heysatay dowladda federaalka Soomaaliya.
“Isku dhafka ciidanka waa xalka kaliya oo muuqaal qaran ku imaanayo, balse waxaa arrintaasi dib nooga dhigay ayaa ah in mudooyinkii ugu dambeysay dagaal xoogan lagula jiro Al-shabaab, waxyna ciidan kasta oo ku sugan deegaan kasta ay ku mashquuleen dagaalkaasi, waxayna haatan dowladda qorsheynaysaa in dhawaan ciidankaasi lasoo saaro, la iskuna dhafo” Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in xerada Daynuunay ee duuleedka Baydhaba ay ka socdaan qorshaha howsha isku dhafka ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed, wuxuuna sidoo kale tilmaamay in arrintaasi ay dowladda dadaal xoogan ku bixin doonto.
“Xerada Daynuunaay ee duuleedka Baydhaba ayaa hadda abaabulka isku dhafka ciidanka ka socotaa, waxaana dhawaan la bilaabi doonnaa guutadda ugu horeeysay ee ciidankaasi” Ayuu madaxweyne Xasan Sheekh hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay.